Sekoly ambony GSI Namoaka teknisianina 150 mianadahy
Pr Rakotonirina Solonjatovo “Ny fampianarana ambaratonga ambony no tena mila fanorenana ifotony”
Naneho ny heviny mikasika ny toekarem-pirenentsika ny profesora Rakotonirina Solonjatovo, tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny sekoly ambony HECCMA omaly.
ISST Paramed Namoaka mpianatra 27 mianadahy
Fiatrehana fidiran’ny mpianatra Hizara kopia ny boriborintany I
Mandritra ity volana septambra ity ka hatramin’ny volana novambra dia hanatontosa hetsika fizarana kopia sy fanamarinam-pahaterahana ny avy eo anivon’ny Boriborintany voalohany,
misandrahaka amina lalam-piofanana dimy dia ny tourisme voyage et hôtellerie, ny informatique de gestion, ny multimédia et communication ary ny management des affaires. Nosafidiana manokana ny anarana nisaloran’izy ireo mba hanainga ny hambom-pon’izy ireo. Misy ny pays émergent ka ho anisany ihany koa i Madagasikara amin’ny alalan’ireto tanora nahazo mari-pahaizana ireto, hoy ny filoha mpanorina ny GSI Atoa Randrianaivo Geremioh. Nisy ny antso avo natao tamin’ny fanjakana nandritra izany mba hanampiana ny oniversite tahaka azy ireo toy ny fanalefahana ny vola aloa amin’ny fampidirana fitaovana ohatra entina hanasoavana ny tanora Malagasy. Ho an’i Andry Ramaroson, mpandraharaha ary ray mpiahy ny andiany Emergence, dia nilaza ny hanampy ireto mpianatra vao nivoaka ireto ny tenany amin’ny alalan’ny “coaching” ary raha tsara ny tetikasa kasain’izy ireo hatao dia vonona ny hanohana ara-bola mihitsy izy. Tsiahivina fa sekoly ambony efa nahazo fankatoavana avy tamin’ny fanjakana ny oniversite GSI.